झुटा लाञ्छनाहरु सहन्‍नँ : प्रधानमन्त्री ओली – Radio shreenagar
४ मंसिर २०७७, बिहीबार १३:२८
त्यसबाहेक त्यसै दिन एउटा प्रस्ताव भनेर अर्का अध्यक्षले मलाई दिनुभयो, अरु सदस्यहरुलाई पनि बाड््नु भयो। त्यो बैठकमा प्रस्तुत भएको प्रस्ताव होइन। बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने हाम्रो विधि भिन्नै छ। एउटा अध्यक्षलाई जानकारी नभइकन अर्का अध्यक्षले कुनै पनि प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन। त्यस्तो दिनुपर्ने पनि कुनै अवस्था आउला, तर अर्का अध्यक्षलाई जानकारी नै नदिइकन, अर्का अध्यक्षमाथि हमला, प्रहार, आलोचना, आरोप र अभियोगसहितको प्रस्तावका नाममा अचानक त्यो मलाई दिनुभयो। अरु साथीहरुलाई पनि वितरण गर्नुभयो। तर, त्यो बैठकमा प्रस्तुत भएको प्रस्ताव होइन। त्यसलाई विधिसम्वत प्रस्ताव भन्न मिल्दैन। तर, त्यस सम्बन्धमा कमिटीमा छलफल आवश्यक छ। त्यो प्रस्ताव भनेर जो वितरण भयो, त्यसपछि जुन अखवारबाजी गरियो। यसो गर्नु उचित भयो कि भएन ? केही मतलबको कुरा भएन। अखवारबाजी गर्नका लागि समेत त्यसो गरिएको थियो र त्यसमा केही साथीहरुको संलग्नता र सहमति भएको पनि जानकारी भयो। त्यसो भएर यो विषय धेरै गम्भीर छ। मैले अस्ति दुई जना कमरेडहरुलाई बोलाएर कुरा गरेँ, वामदेवजीसँग कुराकानी गरेँ र भनेँ कि यसको छिनोफानो नभइकन, यी आरोपहरुसहित, यी आरोप बोकी बोकीकन कोही पनि मानिस अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बस्न त मिल्दैन। यी आरोपहरु या त त्यसबाट बदर हुनुपर्‍यो, तब प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको जिम्मेवारीमा बस्न मिल्छ। त्यसो होइन भने सदर हुनुपर्‍यो र ती पदहरु र ती जिम्मेवारीबाट हट्नु पर्‍यो। यो हटाउने माग त पहिलेदेखि आएकै थियो। तर, यसपटक हट्ने आधारहरु यी हुन्, यसकारण हट्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। पहिलेजस्तो यसमा सोझै प्रधानमन्त्रीबाट हट, अध्यक्षबाट हट भन्ने भाषा छैन। तर त्याग गर्नुपर्छ भन्ने कोटेड भाषा रहेको छ। त्याग भन्ने शब्द त्यहाँ राखिएको छ। यस सम्बन्धमा पहिले छिनोफानो हुनुपर्छ। यो आरोप या त सदर ठहरिनु पर्‍यो, अनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हट्नु पर्‍यो। यो आरोप सही ठहरिंदैन भने यस्तो आरोप लगाउनेले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्‍यो, यसको जवाफदेही लिनुपर्‍यो।
अँ, त्यस्ता झुठा र निकृष्ट लाञ्छनाहरु मैले सहन्छु भन्ने कुरा नसोचे पनि हुन्छ। तसर्थः आज बैठक अगाडि बढ्न सक्ने देख्दिनँ। म त्यसमा बहस गर्न अहिले तयार छैन, किनभने मेरो तयारी नै पुगेको छैन, बुँदाहरु पुगेका छैनन् भन्ने कुराहरु त भनिसकेको छु। त्यसमा फेरि थप के भन्नु छ र ? त्यसमा अरुको पानी चित्र त देखेको छु नि ! त्यसमा त यसो हेर्दाखेरी पानी चित्र त आउँछ नि ! मैले कुरा गरेको छु र सबै सुनेको छु नि ! अहिलेलाई यत्ति नै।अन्नपूर्ण पाेष्टबाट….
प्रकाशित मितिः ४ मंसिर २०७७, बिहीबार १३:२८ |
Prevसचिवालय बैठकमा विष्णु पौडेलको प्रस्ताव- सामूहिक राजीनामा दिऔं
Nextआफ्नै समस्या लेख्दैनन् पत्रकार